Ngatirangarirane Uye Ngatikurudzirane | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Ngatirangarirane kuti tikurudzirane kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo.” —VAH. 10:24.
‘Tingakurudzirana sei kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo’?
1, 2. Chii chakabatsira Zvapupu zvaJehovha 230 kuti zvipone parwendo rworufu Hondo Yenyika II yava kunopera?
HURUMENDE yeNazi payakanga yava kuparara pakunopera kweHondo Yenyika II, yakaronga kuuraya zviuru zvevanhu vakanga vasara mumisasa yevasungwa. Vasungwa vaiva mumusasa weSachsenhausen vaifanira kuendeswa kuzviteshi zvezvikepe kwavaizonokwidzwa ngarava dzaizonyudzwa mugungwa. Zvirongwa zvakadai zvakazozivikanwa senzendo dzorufu.
2 Vasungwa 33 000 vaiva mumusasa wevasungwa weSachsenhausen vaifanira kufamba makiromita 250 kuenda kuLübeck, guta raiva nechiteshi chengarava kuGermany. Pakati pavo paiva neZvapupu zvaJehovha 230 zvaibva munyika nhanhatu uye zvakanzi zvifambe seboka. Vose vakanga vapera simba nemhaka yenzara uye kurwara. Hama dzedu dzakapona sei parwendo urwu? Mumwe wavo akati: “Tairamba tichikurudzirana kuti tirambe tichienda.” Kudanana kwavaiita uye “simba rinopfuura renguva dzose” rinobva kuna Mwari, zvakavabatsira kuti vapone parwendo urwu.—2 VaK. 4:7.
3. Nei tichifanira kukurudzirana?
3 Mazuva ano hatisi kufamba rwendo rworufu asi tinosangana nematambudziko akawanda. Umambo hwaMwari pahwakagadzwa muna 1914, Satani akakandirwa panyika achibva kudenga uye “akatsamwa kwazvo, achiziva kuti ane nguva pfupi.” (Zvak. 12:7-9, 12) Amagedhoni zvainoswedera pedyo, Satani ari kushandisa miedzo kuti atinetese pakunamata. Tinewo matambudziko atinosangana nawo muupenyu. (Job. 14:1; Mup. 2:23) Dzimwe nguva matambudziko ose aya anogona kutiremera chaizvo zvokuti tinopedzisira tisisina simba rokutsungirira kuora mwoyo kwatinenge takaita. Funga nezveimwe hama yainge yabatsira vanhu vakawanda pakunamata kwemakumi emakore. Hama yacho payakanga yakwegura, iyo nemudzimai wayo vakanga vava kugara vachingorwara uye hama iyi yakatanga kuora mwoyo. Sezvakangoita hama iyoyo, tose tinoda “simba rinopfuura renguva dzose” rinobva kuna Jehovha uye tinodawo kukurudzirwa.
4. Kuti tikurudzire vamwe, izano ripi romuapostora Pauro ratinofanira kuteerera?
4 Kuti tikurudzire vamwe, tinofanira kuita zvakakurudzirwa vaKristu vechiHebheru nemuapostora Pauro. Akati: “Ngatirangarirane kuti tikurudzirane kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo, tisingaregi kuungana kwedu, setsika ine vamwe, asi tikurudzirane, kunyanya zvamunoona zuva richiswedera pedyo.” (VaH. 10:24, 25) Tingashandisa sei zano riri mumashoko aya anokosha?
5. Zvinorevei ‘kurangarirana’ uye chii chatinofanira kuita kuti tidaro?
5 ‘Kurangarirana’ kunoreva “kufunga zvido zvevamwe, kana kuti kuvafunga.” Zvingaita here kuti tinyatsoziva zvido zvevamwe kana tichingovakwazisa tichimhanya patinenge tiri paImba yoUmambo kana kuti tichingotaura navo nyaya dzisingakoshi? Hazvingaiti. Ichokwadi kuti tinofanira kungwarira kuti ‘tive nehanya nezvinhu zvedu toga’ uye kuti ‘tisapindira munyaya dzevamwe vanhu.’ (1 VaT. 4:11; 1 Tim. 5:13) Kunyange zvakadaro, kana tichida kukurudzira vatinonamata navo, tinofanira kuvaziva. Tinofanira kuziva mamiriro avo ezvinhu, unhu hwavo, manamatiro avo, zvavanokwanisa uye zvavasingakwanisi. Vanofanira kutiona seshamwari uye kuva nechokwadi chokuti tinovada. Izvi zvinoda kuti tivawanire nguva, kwete chete pavanenge vari mumatambudziko kana kuti vakaora mwoyo asi pane dzimwewo nguva.—VaR. 12:13.
6. Chii chichabatsira mukuru kuti ‘arangarire’ vaanotarisira?
6 Vakuru veungano vanokurudzirwa kuti ‘vafudze boka raMwari ravanotarisira,’ vachizviita nokuzvidira uye nomwoyo wose. (1 Pet. 5:1-3) Vangakwanisa sei kunyatsoita basa rokufudza kana vasinganyatsozivi makwai avanotarisira? (Verenga Zvirevo 27:23.) Kana vakuru vakawana nguva yokuva nevavanonamata navo uye vachinakidzwa nokuva navo, makwai achanzwa achida kutsvaka rubatsiro kwavari. Hama nehanzvadzi dzichanzwa dzichidawo kutaura zviri kutsi kwemwoyo, zvichiita kuti vakuru vakwanise ‘kudzirangarira’ vodzibatsira.
7. Tinofanira kuona sei mashoko “okuvhurumuka” angataurwa nevanhu vakaora mwoyo?
7 Paainyorera ungano yaiva muTesaronika, Pauro akati: “Tsigirai vasina simba.” (Verenga 1 VaTesaronika 5:14.) “Mweya yakaora mwoyo” haina kusimba uye ndizvo zvakaitawo vanoda kukurudzirwa. Zvirevo 24:10 inoti: “Wakaora mwoyo pazuva rokutambudzika here? Simba rako richava shoma.” Munhu akaora mwoyo anogona kutaura mashoko “okuvhurumuka.” (Job. 6:2, 3) Patinenge ‘tichirangarira’ vanhu vakadaro, tinofanira kuyeuka kuti zvavanotaura zvingasava izvo chaizvo zvavari nechomukati. Rachelle uyo ana amai vakamboora mwoyo chaizvo, akazvionera ega kuti mashoko iwayo ndeechokwadi. Anoti: “Kazhinji amai vaitaura mashoko anorwadza chaizvo. Kakawanda pavaitaura izvi ndaiedza kufunga nezvezvavari chaizvo, kuti munhu ane rudo, mutsa uye rupo. Ndakadzidza kuti vanhu vakaora mwoyo pavanotaura zvinhu, kazhinji handizvo zvavanenge vachireva. Hazvina kutombonaka kudzorerawo nemashoko kana kuti nezviito zvinorwadza.” Zvirevo 19:11 inoti: “Njere dzomunhu dzinodzora kutsamwa kwake, uye zvakamunakira kuti aregerere kudarika.”
8. Ndivanaani vatinofanira kunyanya ‘kusimbisa’ kuti tinovada, uye nei?
8 ‘Tingarangarira’ sei munhu anenge achizvidya mwoyo nemhaka yokunyara kana kuti kunetseka kwaanenge achiita pamusana pokukanganisa kwaakaita, kunyange akatotora matanho okukugadzirisa? Paaitaura nezvemumwe mutadzi akanga apfidza aiva muKorinde, Pauro akanyora kuti: “Munofanira kumukanganwira nomutsa uye kumunyaradza, kuti zvimwe munhu akadaro arege kukurirwa nokunyanyosuruvara kwake. Naizvozvo ndinokurayirai kuti musimbise kumuda kwenyu.” (2 VaK. 2:7, 8) Shoko rakashandurwa kuti ‘kusimbisa’ pandima iyi rinoreva ‘kuratidza.’ Hatigoni kuita zvokufungidzira kuti munhu achaziva kuti tinomuda uye tine hanya naye. Zviito zvedu uye zvatinotaura zvinofanira kumuratidza kuti tinomuda.
‘NGATIKURUDZIRANE KUVA NORUDO NEMABASA AKANAKA’
9. Zvinorevei ‘kukurudzira kuva norudo nemabasa akanaka’?
9 Pauro akanyora kuti: “Ngatirangarirane kuti tikurudzirane kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo.” Tinofanira kukurudzira vatinonamata navo kuti varatidze rudo uye kuti vaite mabasa akanaka. Kana moto wava kudzima, tinokuchidzira huni toufuridza. (2 Tim. 1:6) Saizvozvowo, tinogona kukurudzira hama dzedu kuti dziratidze kuti dzinoda Mwari uye muvakidzani. Kuvarumbidza kunogona kuvakurudzira kuti vaite mabasa akanaka.
Buda nevamwe muushumiri
10, 11. (a) Ndivanaani vanoda kurumbidzwa? (b) Taura muenzaniso unoratidza kuti kurumbidza kunogona kubatsira munhu anenge ‘adarika.’
10 Tose tinoda kurumbidzwa pasinei nokuti takaora mwoyo kana kuti hatina. Mumwe mukuru akati: “Baba vangu havana kana musi mumwe wavakanditi ndaita zvakanaka. Saka ndakakura ndichizvitarisira pasi. . . . Kunyange zvazvo iye zvino ndava nemakore 50, ndichiri kuonga chaizvo shamwari dzangu padzinondiudza kuti ndiri kuita basa rakanaka semukuru. . . . Ndakazvionera kuti zvinokosha kukurudzira vamwe uye ndinoedza chaizvo kutsvaka mikana yokuvarumbidza.” Kurumbidzwa kunogona kukurudzira vose kusanganisira mapiyona, vakwegura, uye vaya vangangodaro vakaora mwoyo.—VaR. 12:10.
11 Kana vaya ‘vane zvinodiwa zvomudzimu vakaedza kururamisa munhu anenge adarika,’ zano rorudo uye kumurumbidza zvinogona kumukurudzira kuti atangezve kuita mabasa akanaka. (VaG. 6:1) Izvi ndizvo zvakaitika kune imwe hanzvadzi inonzi Miriam. Yakanyora kuti: “Ndakaomerwa chaizvo noupenyu dzimwe shamwari dzangu dzepedyo padzakasiya ungano uye baba vangu pavakabva vabatwawo nechirwere chokubuda ropa muuropi. Ndakaora mwoyo chaizvo. Ndakatanga kufambidzana nomumwe mukomana wokunyika ndichifunga kuti zvaizoita kuti ndisaora mwoyo.” Izvi zvakaita kuti Miriam aone sokuti haachakodzeri kudiwa naJehovha uye akafunga kusiya chokwadi. Mumwe mukuru paakamuyeuchidza zvaaimboita mubasa raJehovha, akakurudzirwa chaizvo. Akapa vakuru mukana wokuti vamuratidze kuti Jehovha ainge achiri kumuda. Izvi zvakaita kuti atangezve kuda Jehovha. Akasiyana nomukomana asingatendi waaidanana naye ndokuramba achishumira Jehovha.
Kurudzira kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo
12. Chii chingaitika kana tikakurudzira munhu nokumuenzanisa nevamwe, kumutsoropodza, kana kuita kuti anzwe sokuti ane mhosva?
12 Hatifaniri kukurudzira munhu nokuita kuti anyare nokumuenzanisa nevamwe, kumutsoropodza nokuti haasi kuita zvatiri kuda kana kumuita kuti aone sokuti ane mhosva nokuti haasi kuita zvakawanda. Kuita izvozvo kunogona kuita kuti ashingaire chaizvo asi zviri zvenguva pfupi chete. Nzira yakanaka yokukurudzira munhu ndeyokumurumbidza uye kuita kuti aone kuti kuda Mwari ndiko kunoita kuti tide kuita zvakawanda mubasa rake.—Verenga VaFiripi 2:1-4.
13. Kukurudzira vamwe kunosanganisirei? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
13 Tinofanira ‘kukurudzirana, kunyanya zvatinoona zuva richiswedera pedyo.’ Kukurudzira vamwe kunosanganisira kuvabatsira kuti varambe vachifambira mberi pakushumira Mwari. Kukurudzira vamwe kwakafanana nokuwedzera huni mumoto kuti urambe uchipfuta kana kuti uwedzere kupfuta. Kuti tikurudzire vamwe tinofanira kusimbisa uye kunyaradza vakaora mwoyo. Kana tikava nomukana wokukurudzira munhu akadaro, tinofanira kutaura noushamwari uye unyoro. (Zvir. 12:18) Uyewo, tinofanira ‘kukurumidza kunzwa tononoka kutaura.’ (Jak. 1:19) Kana tikateerera tichimunzwira tsitsi, tingakwanisa kuziva zviri kumuodza mwoyo totaura zvichamubatsira.
Shamwaridzana nevanhu vanokuvaka
14. Imwe hama yakanga yakaora mwoyo yakabatsirwa sei?
14 Funga zvakaitwa nemumwe mukuru ane mutsa kuti abatsire imwe hama yakanga yava nemakore isingachaiti mabasa echiKristu. Mukuru wacho paakanga akateerera hama iyi ichitaura, akaona kuti yakanga ichiri kuda Jehovha chaizvo. Yainyatsodzidza nyaya imwe neimwe iri muNharireyomurindi uye yaiedza kupinda misangano nguva dzose. Zvisinei, hama iyi yakanga yaodzwa mwoyo uye yagumburwa nezvakaitwa nevamwe vomuungano. Mukuru wacho akanyatsoteerera hama iyi achiinzwira tsitsi asingaipi mhosva uye akaiudza kuti iyo nemhuri yayo vaidiwa chaizvo. Hama yacho yakazoona kuti yakanga ichiri kuda Mwari asi yaitadziswa kumushumira nezvinhu zvakaitika kare. Mukuru uyu akakumbira hama iyi kuti vabude vose mubasa rokuparidza. Ichibatsirwa nemukuru wacho, hama iyi yakatangazve kuita ushumiri uye yakazogadzwazve kuti ive mukuru.
Nyatsoteerera munhu anenge achida kukurudzirwa (Ona ndima 14, 15)
15. Tingadzidzei kuna Jehovha panyaya yokukurudzira vakaora mwoyo?
15 Zvingatora nguva kuti munhu anenge akaora mwoyo anzwe zvakanaka kana kuti ashandise rubatsiro rwatinenge tamupa. Tingada kuramba tichimutsigira. Pauro akati: “Rambai makabata vasina simba, itirai mwoyo murefu munhu wose.” (1 VaT. 5:14, An American Translation) Pane kuti tikurumidze kukanda mapfumo pasi, ngatirambei takaita sokunge ‘takavabata’ toramba tichivatsigira. Kare, Jehovha aiitira mwoyo murefu vashumiri vake vaimboora mwoyo. Somuenzaniso, Mwari akaratidza nyasha chaizvo kuna Eriya, achifunga nezvemanzwiro ake. Jehovha akapa muprofita wacho zvaaida kuti arambe achiita basa rake. (1 Madz. 19:1-18) Jehovha akakanganwira Dhavhidhi nokuti akanyatsopfidza. (Pis. 51:7, 17) Mwari akabatsirawo munyori wePisarema 73 uyo akapotsa arega kumushumira. (Pis. 73:13, 16, 17) Jehovha ane nyasha uye anotiitira mutsa, kunyanya patinenge takaora mwoyo. (Eks. 34:6) Ngoni dzake “itsva mangwanani mamwe nemamwe” uye “hadzizoperi.” (Mari. 3:22, 23) Jehovha anoda kuti timutevedzere, tobata vakaora mwoyo nounyoro.
NGATIKURUDZIRANE KURAMBA TIRI MUMUGWAGWA UNOENDA KUUPENYU
16, 17. Mugumo wenyika ino zvaunoswedera pedyo, tinofanira kutsunga kuitei, uye nei?
16 Pavasungwa 33 000 vakabva kumusasa wevasungwa weSachsenhausen, pane zviuru zvakafa. Zvisinei, Zvapupu zvaJehovha zvose zviri 230 zvakapona. Kukurudzirana uye kutsigirana kwavaiita ndiko kwakaita kuti vapone parwendo rworufu urwu.
17 Mazuva ano, tiri ‘mumugwagwa unoenda kuupenyu.’ (Mat. 7:14) Munguva pfupi vanamati vaJehovha vachafamba vakabatana vachipinda munyika itsva yokururama. (2 Pet. 3:13) Ngatitsungei kubatsirana tiri mumugwagwa unoenda kupenyu husingaperi.